Jowhar.com - Somali news Leader - News: Daawo sawirada sida ay u saameysay fatahaada wabiga tuulada Libiga
December 12 2013 02:37:14
Daawo sawirada sida ay u saameysay fatahaada wabiga tuulada Libiga
Qoysas badan oo ku noolaa deegaanka Libiga oo dhinaca Waqooyi kaga began magaalada Jowhar illaa iyo 3km ayaa kala kulmay qasaare badan fatahaada wabiga Shabelle iyagoo ka barakacay guryahoodii. Tuulada Libiga ayaa waxa ay ku waabariisteen subaxnimadii Talaadadii aynu ka soo gudubnay oo ku beegneyd 20ka bisha August iyadoo biyaha ka soo fatahay wabiga ay dhinac walba ka soo galeen tuulada. Inta badan dadkii ku noolaa tuulada ayaa aaminsanaa in biyaha fatahaada ay iska celin karaan balse waxa ay talo faraha ka baxday kadib markii xilli habeenimo ah ay ka soo gudbeen biyaha xeyndaabkii ay ku wareejiyeen tuulada. Qoysaskii degenaa tuulada Libiga ayaa waxa ay barakaceen deegaano kala duwan sida magaalada Jowhar iyo tuulooyinka ku dhow dhow magaalada. Xuseen Shiiraar Qanyare oo ku magac dheer Ontorow oo ka mid ah dadkii ku noolaa deegaanka Libiga una soo barakacay magaalada Jowhar ayaa maanta dib ugu laabtay guryahiisa si uu indhahiisa ugu soo arko sida uu yahay xaalka gurigiisa iyo beer uu ku lahaa duleedka tuulada Libiga. Ontorow oo ay la socdaan wiilal dhalinyaro ah ayaa waxa uu indhihiisa ku soo arkay ay noqdeen wax uusan cimrigiisa oo lixdan kabadan uusan hore ugu arkin deegaankii uu ku noolaa. Ontorow oo xilli galabnimo ah ka tegey magaalada Jowhar ayaa waxa uu sii dhex maray biyo faro badan oo ku jiray wadada waxana biyahaas meelaha qaarkood ay gaarayeen qaarka sare ee jirkiisa. Waxaa buuxiyay guri walba biyo waxa uu booqday dugsi quraan ay carruurtiisu wax ku baran jireen, masjidkii uu ku cibaadeysanayay iyo beertii uu ku lahaa duleedka Libiga.
Dugsigii ay carruurtiisa dhigan jireen waxaa dhex daadayay looxdii ay ilmaha wax ku baranayeen,gurigiisa ayuu ku soo dhex arkay caag saliid ay ku jirto iyo alaabo kale oo ay uga carareen guriga. Beertiisii sisinta oo uu islahaa sanadkan waxaad ka helaysaa lacag badan ayaa waxa uu si halhaleel ah uga dhex arkay qaar ka mid ah abaaladii uu ka tubay oo biyaha dhexdooda ku daadsan.
Ontorow waxa uu dib ugu soo laabtay magaalada isagoo weli ka walwalsan xoolo u badan lo� oo uu dhaqaaleysan jiray halka uu daaq ugaga raadin doono maadaama inta badan deegaankii uu ku noolaa ay biyo dhex ceegaagaan.
Maalin walba ayaa fatahaada wabiga Shabelle uu ka samaynayo tuulada Baarey waxaa ay sii gaarayaan deegaano hor leh waxaa hore ugaga barakacay saldhigoodii ciidamada AMISOM ee ku sugnaa duleedka magaalada Jowhar iyagoo ku biiray ciidamo hore u degenaa garoonka dayuuradaha. Hase yeeshee waxa ay biyaha iyagoo si xowli ah ku socda ay u sii socdaan dhinaca garoonka dayuuradaha. Somali news leader
mahad on August 26 2013
0 Comments · 6549 Reads
jowhar.com3,170,825 unique visits